ယနေ့ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန် နည်းလမ်း (၅)ခု – Shwehealth.com
15. ဇူလိုငျ 2016 23. မေ 2016
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို မီးရှို့လိုက်ပြီးနောက် ထွက်လာသော အငွေ့ကို ရှူသွင်းခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် သို့မဟုတ် အလေ့အကျင့်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ အသုံးအများဆုံး အရာဝတ္တုမှာ ဆေးရွက်ကြီးပင်မှ ရရှိသော အရွက်ခြောက်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ယင်း၏ လူ ကြိုက်အများဆုံးပုံစံမှာ စီးကရက်ဖြစ်သည်။ အရွက်ခြောက်များမီးလောင်ခြင်းဖြင့် အငွေ့ထွက်လာပြီး ယင်းအငွေ့က ဆေးရွက်ကြီး၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို အဆုတ်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိစေသည်။ ထိုမှတဆင့် သွေးစီးကြောင်းထဲသို့ ရောက်ရှိစေသည်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၏ အခြားပုံစံများမှာ ဆေးတံသောက် ခြင်း၊ ဆေးပြင်းလိပ်သောက်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူသုံးအများဆုံးဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ပုံစံများမှာ စီးကရက်နှင့် လက်လုပ် ဆေးပေါ့လိပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို အထူးသဖြင့် အသက်ရှုလမ်း ကြောင်းစနစ်ကို ဆိုးဝါးစွာထိခိုက်စေနိုင်သည်မှာ သံသယဖြစ်စရာ မရှိပေ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဖြင့် အခြားရောဂါများဖြစ်ကြသည့် အဆုတ်ကင်ဆာ၊ နှလုံးရောဂါများ၊ နာတာရှည် အဆုတ်လေပြွန်ပိတ် ခြင်း ရောဂါ၊ ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါနှင့် မီးဖွားခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။ လူတိုင်းသိထားသကဲ့သို့ပင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းသော်လည်း ယင်း၏ စွဲလမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေမှုကြောင့် ဖြတ်ရန်မတတ်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေကြရသည်။ ထို့ကြောင့် ဤနေ ရာတွင် ဆေးလိပ်ဖြတ်ရာတွင် အကူအညီပေးနိုင်သည့် နည်းလမ်းအချို့ကို ဖော်ပြပေးမည် ဖြစ်ပါ သည်။
(၁) ရည်မှန်းချက် ခိုင်ခိုင်မာမာထားပါ
မည်သည့်စွဲလမ်းမှုတွင်မဆို ခိုင်မာသောစိတ်ဓာတ်သည် အကောင်းဆုံးစဦးခြေလှမ်းပင် ဖြစ် သည်။ သင့်အနေဖြင့် ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကို ချရန်လိုအပ်ပြီး ယင်းရည်မှန်းချက်ကို ပြည့်အောင်လုပ်ရန် မိမိကိုယ်ကို အားပေးရမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်သင်ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုသည်ဟူသော အကြောင်း များကို စာရွက်တွင် ရေးချထားပြီး နေ့စဉ်ပြန်ကြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆောင်ထားခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ် နိုင်သည်။ ဆေးလိပ်သောက်လိုစိတ်ဖြစ်လာသည့်အချိန်တိုင်းတွင် ယင်းအချက်များကို ပြန်၍စဉ်းစား ခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပြင်းထန်ခိုင်မာသောစိတ်ဓာတ်သည် စွဲလမ်းမှုတိုင်းကို ရပ်တန့်နိုင်ရန် မရှိမဖြစ် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
ဆေးလိပ်အပြီးဖြတ်မည့် ရက်စွဲတစ်ခုကို သတ်မှတ်ပါ။ ပြီးလျှင် ထိုနေ့ရောက်သည့်အခါတွင် ဆေးလိပ်ဖြတ်နိုင်နေစေရန် ဖြေးဖြေးချင်းကြိုးစားပါ။ အလွန်စွဲလမ်းနေသော သို့မဟုတ် ကာလကြာ ရှည်စွဲလမ်းနေသော သူများတွင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ရုတ်တရက် ရပ်တန့်ရန် လွယ်ကူမည် မ ဟုတ်ပေ။ တနေ့တာသောက်သုံးသော ဆေးလိပ်ပမာဏကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့်နေ့ တွင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို အပြီးရပ်တန့်နိုင်ရန် အစီအစဉ်ပြုလုပ်ပါ။ တနေ့တာ သောက်သုံး သည့်ပမာဏကို လျှော့ချရန် နည်းလမ်းအချို့မှာ နေ့တစ်နေ့၏ ပထမဆုံးစီးကရက်ကို သောက်သုံးရန် အချိန်ဆွဲခြင်း၊ ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ခြင်းစီကို တစ်ဝက်သာ သောက်သုံးခြင်း၊ တစ်ကြိမ်ဝယ်လျှင် စီးက ရက်တစ်ဘူးသာဝယ်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်။
(၃) မိတ်ဆွေများနှင့် မိသားစုဝင်များ၏ အကူအညီကို ရယူခြင်း
သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား မိမိ ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်သည့် အကြောင်းကို ပြောပြထားပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်အားဆေးလိပ်သောက်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း သို့ မဟုတ် ဆေးလိပ်ပေးခြင်းတို့ကို ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်စီးကရက်တစ်လိပ်ကို ကောက်ကိုင် လိုက်တိုင်း သင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန် ကြိုးစားနေသည်ဆိုသည့်အကြောင်းကို သတိပေးရန် ထိုသူများ အား အကူအညီတောင်းခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်သေးသည်။
(၄) အခြားအစားထိုးစရာတစ်ခုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ဆေးလိပ်သောက်ချင်စိတ်ဖြစ်စေသည်များကို ရှောင် ကျဉ်ခြင်း
သင်အားဆေးလိပ်သောက်လိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာစေသည့် အခြေအနေများကို မှတ်သားထားပြီး ယင်းတို့ကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကျဉ်ပါ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ခွင့်မပြုသော နေရာများသို့ မကြာ ခဏသွားပါ။ ဆေးလိပ်သောက်ချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်း တခုခုလုပ်နေရန် ကြိုးစားပါ။ မီးခြစ်ဆောင် ထားခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။ အစားစားပြီးလျှင် စားပွဲမှ ချက်ချင်းထပါ။ ကော်ဖီသို့မဟုတ် အရက်အစား ရေသို့မဟုတ် လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကိုသောက်ခြင်းဖြင့် ဆေးလိပ်သောက်ချင်စိတ်ကို လျှော့ချနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အစားတစ်ကြိမ်စားပြီးတိုင်း လက်ဖက်ရည်ကြမ်းတစ်ခွက်ကို သောက်ခြင်းဖြင့် ဆေးလိပ် သောက်ချင်စိတ်ကို လျော့နည်းစေနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာ ယင်းသည် အစားစားပြီးနောက် ပါးစပ်ထဲ တွင် အချွဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို လျော့နည်းစေသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ဆေးလိပ်သောက်ချင်စိတ်ပေါ်လာ တိုင်း အခြားအစားထိုးစရာများဖြစ်သော ပီကေကဲ့သို့အရာများကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်သည်။ နီကိုတင်း ပါဝင်သော မီးလောင်ကျွမ်းအငွေ့ထွက်ခြင်းမရှိသည့် အီလက်ထရောနစ်စီးကရက်ကိုလည်း ရွေးချယ် နိုင်သေးသည်။
(၅) ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးနှင့် ပြသပါ
ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးနှင့် တိုင်ပင်ခြင်းသည်လည်း အခြားရွေးချယ်စရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့် ဆေးလိပ်ဖြတ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် ဆေးဝါးများကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ FDA မှ အသိအမှတ်ပြုထားသော ဆေးလိပ်ဖြတ်ဆေးများစွာရှိသည်။ Bupropion ဆေးသည် နီကို တင်းလိုအပ်ချက်ကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် ကူညီပေးနိုင်သလို Varenicline ဆေးသည် ဆေးလိပ်သောက် ခြင်း၏ နှစ်သက်ဖွယ်အရသာများကို လျော့နည်းစေသည့်အပြင် နီကိုတင်း ဆေးစွဲသည့်ဒဏ်ကိုလည်း လျော့နည်းစေနိုင်သည်။ အခြားသော နီကိုတင်းအစားထိုးကုသမှုများဖြစ်ကြသည့် ကပ်ခွာများ၊ ပီကေ များနှင့် ငုံဆေးများကိုလည်း ရရှိနိုင်သေးသည်။
စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုများသည်လည်း ဆေးလိပ်သောက်ချင်စိတ်ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ယင်းစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် တခုခုလုပ်နေခြင်း၊ အနားယူခြင်း၊ အသက်ပြင်းပြင်းရှူခြင်း သို့မဟုတ် နှစ်သက်ရာ သီချင်းတခုခုကို နားထောင်နေခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင် သည်။ စီးကရက်မသောက်ဘဲ နေနိုင်သော တစ်နာရီတိုင်းသည် သင်၏ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိရန် ပို၍ နီးကပ်လာသော ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လုံးဝဆေးလိပ်သောက်သုံးခြင်းမရှိသော နေ့တစ်နေ့အ တွက် မိမိကိုယ်ကို လေးလေးနက်နက် ဂုဏ်ပြုပါ သို့မဟုတ် ဆုချပါ။ ထို့နောက်တွင်တော့ သင်၏ ရည်မှန်းချက် ပြီးမြောက်မှုအတွက် အောင်ပွဲခံနိုင်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။